Xildhibaanno iyo Siyaasiyiin Iideh u sameeyay Alshabaab & Xildhibaan Jawaab culus u diray (Warbixin Xiiso leh) - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Xildhibaanno iyo Siyaasiyiin Iideh u sameeyay Alshabaab & Xildhibaan Jawaab culus u diray (Warbixin Xiiso leh)
Kadib warkii ay baahiisay Alshabaab ee ku saabsanaa inay lacago ay ku sheegtay Zekowaad u qeybisay qaar ka mida dadka Muqdisho ayaa warkaasi waxaa fursad u arkay si weyn u sii baahiyey qaar ka mida siyaasiyiinta iyo xildhibaannada Barlamaanka, iyagoo iidheh u sameeyay Alshabaab.
Xubnahan ayaa dadweynaha baraha bulshaada adeegsaday ay ku eedeeyeen inay kooxda Alshabaab u fidiyeen dacaayad kadib markii ay faafiyeen muuqaalladii Alshabaab ku sheegatay inay lacag qeybisay dadka magaalada Muqdisho, iyagoo weliba ku sii daray been abuur ah in arrintaasi ka dhacday suuqa Bakaaraha.
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur Warsame oo ka mida dadka sida weyn u mucaarada dowladda Soomaaliya ayaa qoraalkan so socda ku faafiyey baraha bulshada, iasgoo la kulmay jawaab celin si weyn loogu weerarray.
Waxaa la yaaab lahayd in qoraalka C/raxmaan C/shakuur uu la dhacay, kadibna twitter-kiisa kusii faafiyey wasiirkii hore ee Amniga oo hadda ah xildhibaan ka tirsan Xisbiga uu hoggaamiyo Xasan Sheekh, waa ninka lagu magacaabo C/risaaq Cumar Maxamed, wuxuuan qoraalkiisa ku yiri:
(Afhayeenka Alshabaab Cali Dheere wuxuu maanta Zeko ku qeybiyay Suuqa bakaaraha oo 1 KM u jira Madaxtooyada Villa Somalia. Waa xilligii Baarlamaanka waajibaadkiisii la socodka sameyn lahaa..”
Laakiin waxaa jawaab culus ka bixiyey xidhibaan Mahad Maxamed Salaad oo qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ku caddeeyay inaan la isku khaldin mucaaradnimada iyo buubuuninta Alshabaab, wuxuna qoraalkiisa ku yiri:
SHABAAB MIYAA LOO DANAYNAYAA MISE?!
“Shabaab ayaa Suuqa Bakaaraha lacag Zako ah ku qeybinaya dadka faafinaya ma dalka iyo dadka Soomaaliyeed ayay ugu daneynayaan mise Shabaab ayay buunbuunin iyo suuq geyn u sameynayaan?!. Anigu waxaan qabaa dhaliilaheenu in ay noqdaan kuwa wax dhisaya. Dalka iyo dadkana aan u turno oo cadow in uu qabsado yaanan horseedin. Fashilka amni ee jirana aan kula xisaabtano hay’adaha iyo dadka ka mas’uulka ah!…”
Dad badan ayaa baraha bulshada u jawaabay xubnaha siyaasiyiinta iyo xildhibannada isugu jira ee ay isaga khaldantay mucaaradnimada iyo taageerada argagixisada oo keeni karta in dembiyo lagu soo oogo, tiiyo ay been abuur ku dareen warkii Alshabaab.
W/DIYAARIYEY: WADANI MEDIA
Alshabaab Mucaarad Top